Semalt: 10 Email & Internet Scams - Nzira Yokuramba Yakachengeteka Sei?
Kuparadzirwa kwemaEmail kwakave nzira inowanzogadziriswa yekufambisa kerubheri paIndaneti. Twitter uye Facebook seyo inotungamira mapurisa ekugadzira mitambo yevanhu ndeye nzira itsva mu cybercrime mushure mekare ve spam emails.
Mutungamiri Mukuru Wekutsvaga Semalt , Ryan Johnson, anotsanangura email spam uye internet scams uye kuti vadzivise sei.
Imeyiri yepamende yakagadzirirwa kuibva kune imwe sangano yegoti yakaropafadzwa uye inoparidzira mari inowanikwa nemunhu anenge atambudzwa kunyange kana vasina kupinda mune chero bhidhiyo basa.
Imeyili ye spam inonyadzisa kana iri munhu, zita rekutaridzirwa risina kukwana, lottery haisipo, uye mail ye spam inokumbira kuti uwane ruzivo rwomunhu oga - cuarto de servidores.
Mamwe emafamende e-spam anotungamirira kunonyengeri anogona kuuya sekukoka kune basa rekuongorora. Kushandura pahutano hwakagadzirirwa purogiramu inosangana nemabasa ari pamakombiyuta anotungamirira kubira mabhasiwedi, ruzivo rwebhangi uye ruzivo rwomunhu oga runoita kuti kuparara kwemari.
3. PayPal kana Online Credit Card Scam
Imeyiri iyo inoratidzika kuva yakarurama kubva kunekutsvaga mari mumutambo wekambani kana kambani yekwereti yekwereti inogona kukumbira basa rinokurumidza. Mashoko anopiwa neanoshungurudzwa anopedzisa kugadzirisa kambani yavo kurasikirwa nemari inowanika kana kubhakwa kwekuziva.
Muzviitiko zvakawanda, kero yemutumeri iri kunyunyuta, iyo email haina imwe nzvimbo yekuwedzera, kubatana kunobatanidza hakubvumirwe, uye email inosanganisira kutyisidzira kune anenge atambudzwa.
Imeyiri yepamu inopikira mari yakawanda kuburikidza nekuita zvishamiso zvisingaoneki paIndaneti inonzi scam..Izvo zvinokuvimbisa kukubhadhara iwe kuti uite kutenga paIndaneti. Zvisinei, munhu anoda kubhadhara kudzidzira, kana kuti anopa kero yavo kugamuchira chekunyengera.
5. Foreign Foreign Check Scam
Iyi email ine spam inosanganisira mumiriri wemumambo anotumisa anoda rubatsiro kuti adzorere mari yakawanda yemari yakachengetwa munyaya ye oversea. Iyo yakanyorerwa inove yakanyengerwa kutumira kutengesa mari yakawanda kakawanda pasina kugadzirisa chikamu.
6. Yakatorwa Profile
Nhamba dzekutsvaga paIndaneti dzinogona kukanganisa kambani yevhidhiyo yevhidhiyo kuti ikumbire nyasha kubva pakurongwa rwevamwe munyaya. Vakatambudzwa vanotumira mari kuti vabatsire shamwari dzavo dzisinganzwisisiki kuva con.
Kunze kwe spam emails, vanokanganisa post vanobatanidza kune mhinduro uye yemitambo inoda nhamba dzefoni. Kupindira mumitambo iyi kunotsanangurira mutengi kunyengera.
8. Photo Suspicious Scam
Mharidzo inotyisa inobatanidzwa pamasangano evanhu anokonzera kuziva. Mharidzo inoratidza kuratidzwa kwezvifananidzo zvisina kupfeka zvemushandisi zvinokonzera kukurudzira zvinotevera zvikwangwani zvinowanzovatsanangurira nekunyengedza.
Unogona kuwana Twitter kukokwa kubva kumushandisi anonyunyuta. Kushandura kubatana kwavo kunokutungamirira kumawebsite anogona kuve akakwanisa kuwanikwa e-spyware kana malware pasina ruzivo rwako.
Yakaiswa mufananidzo wemwana anorwara pamusangano wekugarisana nevanhu vanokumbira kupa mari yekurapa. Vanhu vanobata nemharidzo vanopa uye vanogovera nhau kune vamwe vanhu vasingazivi kuti ndeyekutuka.
Kuti ugare wakachengeteka, bvisa maimeri asina kukumbirwa, usatenda muzvikwereti uye zvivimbiso zvemari kubva kune vusingazivi, tsvaga chero chikumbiro chemari paIndaneti, usamboreurura ruzivo rwemunhu oga uye usambofa pane zvisungo zvinganetseka.